Ukuhlangana engalindelekile labo abanandaba - limnandi njalo futhi esijabulisayo. Kodwa ngisho nicer ukuba uzilungiselele ngokugcwele futhi ukwazi ngokuqinisekile ukuthi uma, isibonelo, kulobubusuku ukubona omunye kwayo oyithanda kakhulu iphupho ayekusho? Kulokhu, uzokwazi ukulungiselela lo kwakuwukubonana kanye nenhloko labakhethiwe. Nokho, kubonakala sengathi cishe akunakwenzeka ukwazi ngokuthe ngqó cishe usuku esikhathini esizayo? Futhi nangu isizathu. Kunezindlela eziningi yasekuqaleni ukuba ayohlola mayelana kwakuwukubonana oluzayo, futhi phakathi kwabo ukuqagela umhlangano othandekayo wakhe.
Wazi kanjani mayelana nomhlangano ne othandekayo: Izindlela
Elula futhi kusukela kule indlela isidina kunazo ukuze ufunde mayelana nosuku oluzayo - ukucela ngqo kusuka indoda yakho ukuthi bebone noma cha. Kodwa, okokuqala, lezi zintokazi neze ukubuza imibuzo enjalo, futhi, okwesibili, mhlawumbe intandokazi yakho unaware of imizwa efudumele kuye. Ezimweni ezinjalo, ungasebenzisa isikhali imfihlo - ukubhula ukuhlangabezana lowo omthandayo. Ungakwenza kanjani lokhu? I Ochwepheshe kusukela mkhakha esotericism zithi ithuluzi engcono ukuthola impendulo enemininingwane kakhulu lo mbuzo amakhadi Tarot.
Yini ekhethekile ngale okubhula inhlanhla?
fortune Engaqondakali etshela umhlangano othandekayo wakhe uyoba yi olunembile kakhulu, uma uya Tarot amakhadi imilingo. Emuva ekhulwini le-16 kufika kukhulunywa ngaye okokuqala indlela enjalo ukubikezela ikusasa futhi esikhathini esidlule nezamanje. Tarot kubhekwa okwazalelwa yaseGibithe lasendulo. Amamephu bayakwazi ukunikeza iseluleko okuhle, hhayi nje ezindabeni yokubonisana uthando, kodwa futhi ebhizinisini, ezempilo. izithombe eyinkimbinkimbi osemqoka ezingaqondakali ukuba izimfihlakalo ezizokwehlela abantu. Kodwa kanjani wokufunda ngesikhathi ukubhula ukuhlangabezana nothandekayo lezizibonakaliso ongaqondakali, okukunika ibalazwe? Phambili yezinto ezithakazelisa kakhulu.
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi amakhadi enhlanhla emhlanganweni othandekayo wakhe?
Ukuze uthole impendulo umbuzo onjalo iyaphazamisa, kufanele sina ingalo Thatha Major Arcana of Tarot. Ngaphambi kokuthi uqale le nqubo ngokuthi ukubhula (ngabe umhlangano ethandekayo), zama ukubona ngehlo lengqondo abakhethiweyo. Kwake kwathi ngo-enganakile khona isithombe egqamile futhi ngempela ongokoqobo ngokulinganiselwa amadoda akho, ucacise umbuzo othile. Ungase uthi ngisho ngokuzwakalayo. Manje ephuzwini: inqubo lokubhula ukuhlangana nabathandekayo siqala! Ngokuphelele uhlanganise emphemeni, bese ukhetha amakhadi 9. Wabekeni kufanele kube ngale ndlela: ngesimo esiphambanweni Beka amakhadi ezine zokuqala kubheke phansi. Isithombe yokuqala kufanele ibe ngakwesokunxele. Labo abasele abanga-3 amakhadi zibekwe isiqondiso ngokwewashi. Ngakusasa amakhadi ezine futhi kufanele abeke ngendlela esiphambanweni - kusuka khona kuqala. Phakathi leziziphambano ezimbili ezibekwe ezansi ikhadi lesishiyagalolunye. Futhi ngaphansi kuyilokhu kwamuva - okubizwa ngokuthi significator.
Kulungiswa lokubhula ukuhlangana nabantu obathandayo
Ingabe ukulungele ukuba bafunde iqiniso ayesifuna ngabomvu? Ngisho imizuzwana embalwa, futhi ngeke ukwazi ukuthi kufanele ayilindele ngakuluphi uhlangothi ukubamba umhlangano nalabo ngaye yonke imicabango yakho. Thatha ikhadi lokuqala. ubuyekeze ngokucophelela isithombe kuso. Lokho ngeke usitshele kafushane ngawe. Ibalazwe yesibili ibonisa ukuthi isimo sengqondo abantu abakuzungezile, lokho abakucabangayo umuntu wakho? Isithombe wesithathu ibonisa ukuziphatha kwakho lobu buhlobo zamanje. Ngokusho ikhadi lesine kungenziwa yahlulelwe, kwenzeka kanjani umlingani wakho ekahle. Ikhadi yesihlanu uzokutshela imfihlo, kunoma iyiphi indawo futhi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, kube nomhlangano elindelwe. Ngosizo izithombe eziyisithupha niyolazi kanjani ukusheshisa usuku lwakho. Seventh azisa ikhadi kobunzima kungenzeka, ngenxa okungase kube umhlangano wakho lihlehliselwe isikhathi eside. Kodwa ungalilahli ithemba: amakhadi eziyisishiyagalombili - sovetchitsa ezinhle. Nge lesi sithombe uzothola into ewusizo ngokwakho. ikhadi lesishiyagalolunye owaziyo ukuthi umhlangano kuyokwenzeka ngonyaka ozayo. Kodwa Significator kuyoba ukuphila uma kwenzeka ukuthi ikhadi odlule kuzoletha izindaba ezimbi.
Uma nawe uke waba "kuwe" nge emphemeni of ukubhula ngamathambo, ukubhula uyomenzela isithombe esicacile futhi ugweme zonke "izingibe". Futhi uma izithombe ezingaqondakali kodwa nawe kubonakale kakhulu eziyinkimbinkimbi, ungahlala iphendukele nokuchazwa Tarot. Ngokuvamile, iphini iza okufundisayo ngokuhlangenwe amagugu kwezinhlamvu. Nokho, ngokulotshiweyo enemininingwane futhi ungathola ku-intanethi. Ngokuhamba kwesikhathi, uyozizwa nobudlelwano obuthile magic amakhadi, futhi uzokwazi ukuqonda kubo "shazi".
Imfihlakalo Tarot: ukubaluleka amakhadi ukubhula
Kungani iphupho umbani, futhi yini imiphumela yalokhu kungalindeleka
Saddlebags ngoba ezithuthuthwini: izinhlobo eziyisisekelo, amathiphu okukhetha
Sychkov umculi V fedotov: Biography, izici amaqiniso zokudala futhi ezithakazelisayo
Izimpawu zokuqala okunoshevu izingane
Kungani ishq amashiya? Izindlela sokwelashwa prophylaxis of